Wariye Ka Tegay Hargeysa Oo Xanuunka Coronavirus Loogu Karantiilay Nairobi Iyo Qisada Maalmihii Uu Qolka Ku Xidhnaa. |
Wariye Ka Tegay Hargeysa Oo Xanuunka Coronavirus Loogu Karantiilay Nairobi Iyo Qisada Maalmihii Uu Qolka Ku Xidhnaa.
Nairobi(GNN):-Cudurkan Covid-19 ee dunida saaqay kadeedka dadku ka muteen waxa ugu fudud, haba u bateen dadka safarada ku jiray e, karantiimayn qofku keligii meel ku xidhnaado. Ha ahaato karantiimadaasi mid qofku isku xilqaamay, waa sidii bilowgii arimuhu ahaayeen e, iyo markii dambe oo ay khasab noqotay oo dawladuhu wajibiyeen. Ka mid baan ahaa dadka socdaalka ku jiray markii dalalka qaarkood qaanuunka ku dareen.
Qosol, welwel, cadho iyo la yaab intuba way ka buuxeen mudadaa aan ku jiray ee maalinta keli ahi haatan ii hadhaye, aan ku horreeyo markaan madaarka JKIA ee Nairobi ka soo degay 12:50 kii habeennimo 25 Maarij 2020. Waxa ka hadhsanaa markaa 23 saacadood mudadii Kenya oon ku noolahay joojinaysay duulimaadyada rayidka ah ee rakaabka.
Shaqaalaha caafimaadka ee garoonka joogay waraaqo aanu buuxino iyo heer kulka jidhkayaga oo ay cabiraan bay ku ekayd hawshii ay qabanayeen. Waxa se yara dawakhaad iyo karaahiyo ka muuqatay saf dheer oo loo galay goob la dhigay liiska xarumaha dawladda Kenya ansixisay ee qofka dalka markaa soo galaa midka uu awoodo ka dooranayey inuu tago.
Qofku ha is xilqaamo oo goobta karantiinka ha is geeyo iyo askar baa ku kaxaynaysaa laba aan is lahayn bay u ekaayeen. Isdiiddadaa se waxa lagu macneeyey in dad qaarkood masuuliyiin yihiin oo la ixtiraamay ay qudhoodii dacal mareen taladii caafimaad oo shacabkii sadheeyeen. Waa mararka aad u garaabayso ummadaha kale ee dadka Afrika ku dura xilkasnimo darrada xataa ilaa heer qof ah, hase yeeshee mar haddaad madowdahay waa iska caadi in aad is diidsiisaa!
Kolkaad halkaa ka dhammaato adiga oo ku yara daalay saf dadka qaar iyaga oo laga gar joogo murankoodu dib kuu dhigayo, ayaan u soo baxay dibadda. Waaba askar iyo basas waaweyn oo aad mooddo kuwii maxaabiista! Garoonkii buuxi jiray waxaad mooddaa xero milatari la wareegay oo dadkii khasab lagaga dareeriyey, baabuur aan askari saarrayn ma taagna iyaguna waa teel teel oo meeshu cidlo haariban ah bay u ekaatay.
Saacad iyo dheeraad muddo ah oo aan taagnayn ka dib, waxa na laga buuxiyey bas weyn oo askari wado mid kale oo qori sitaana na ilaalinayo. Cudur baa la xakamaynayaa iyo ummaddaa dusha la iska saarayaa baa hadana si iiga degi weyday. Qosol ba waa ka dambeeyee shaw askartaneey hudheelka aan doortay halka loo maro iyo meel uu ku yaal toona ma garanayaan, madax adayg se waa u Afrika iyo caadadeed!
Dadkii badankoodii ha lagu dajiyo qaar ba halkii u qornayd, aniga iyo islaan reer Yurub ah ah ayaa isku meel u soconna. Ha is xammamuuro askarigii gaadhiga waday oo jaho kale afka ha saaro. Wax yar markuu socday baan ku idhi, “xagaa aad u dhaqaaqday inagama xigo oo xataa looma maro hudheelkaan ku soconaa.” Dhegeey jalaq ba!
Qiyaastii tobaneeyo daqiiqo ka dib ayaan is eegnay aniga iyo islaantii oo yaabani. Waan ku celiyey hadalkii, kuye ” kaagan yari ma askartaad ka taqaan magaalada!” Waxaanu soconnaba mar dambe ayuu istaagay oo intuu dirawalkii nagu soo jeedsaday yidhi, “horta saw wadadan lama mari jirin” is eegnay labadayadii anagoo yaabban hadana! Haatan diyaar buu u ahaa tilmaan iyo in aanu u sheegno halka uu na geynayo. Ugu damabayn sidaan u hagaynay na gee halkaan u soconay.
Waa abaaro 3: 45 daqiiqo oo habeennimo, hudheelkii baanu galnay oo dad naga soo horreeyey ayaanu waxoogaa sugnay intii loo adeegayey. Sidii nidaamku ahaa xogtii la iga doonayey iyo carbuuntiiba bixiyey, makhsinkaygii waxaan gaadhay 4:12 daqiiqo daalna kax baan ahay, subaxaa quraacdii i dhaaftay oo la ii toosin kari waa qadadii baan se kala qabsaday hudheelka!
Intii aan ku jiray hudheelka la nagu karantiimeeyey oo dad ka buuxeen, hadana aydaan mid qudha is arkayn, waxa kolba imanayey shaqaale ka socday wasaaradda caafimaadka oo kolba eegayey halka uu marayo heer kulka qof kastaa, inta aan horta qofka laga qaadin candhuufta iyo duufka shaybaadhka la geyn doono. Waxay hubinayeen in ay qofka ku soo baxeen calaamadaha hor dhaca u ah cudurka ee lagu garan karo. Saddex goor oo ay shaqaalaha caafimaadku iigu yimaadeen qolkayga ayay intaba ii sheegeen in aanay iga muuqan astaamaha hordhaca ah ee ay eegayaan, heer kulka jidhkaguna halkii caadiga ahayd taaganyahay. Erayadan kooban ayaa ku soo dhacay maankayga oo waxaan is arkay anigoo afarraydan kor ugu dhawaaqaya.
Koroonayahow dunidii kala xidhay
Kuudadshee dadkii kadayoow
Kadeedkaaga iyo kurbada badan
Kariimka Alleen iskeen tusin baan
Kun iyo milyan goor ku mahadinayaa!
Markaad keli ku noqoto qol yar oo aad afarta gidaar is daawataan, waxaad xasuusanaysaa xorriyadii taxtaxaashka ee markii hore aanad macnaheeda dhaadi jirin. Waxaad ogaanaysaa in, inta Eebbe ku manaystay aadmiga neefta mooyee xorriyada wax ka horreeyaa jirin. Bal hadaba sidee xaal ahaa markaan afarta gidaar iyo anigu is weheshanaynay? Ma dhib yara oo waxaad u dulqaadataa waxa aad adigu dooratay wixii se duruufi kugu dirqidaa diiqaddooday leeyihiin.
Ma sidan baan dadka uga nixinaa?
Madadaalo bal ka eeg baad is odhaysaa TV-ga, saa isagaaba diiqad iyo belo sheeg mutuxan kugu noqonaya! Waddan walba war baas baa laga soo sheegayaa, kaaga darane mararka qaar waxay waraysanayaan dhakhaatiir iyo kalkaaliyeyaal caafimaad oo u caal la’ cudurkan. Anigii, waa halkii dadka qaarkoode ka mid ka ahaa kuwaa hadalka ka baayac mushtara, ayaa yaabay oo is weydiiyey warfidiyeen haddaad tihiin ma sidan baad dadka uga nixisaan?! Dunidu madoobaa ilayn marka dhibta dunidii masaysay dhaayahaagu hagaag u arkayaan
Duhurkii, galabtii iyo fiidkii ba waxa TV-yada Kenya soo gubinayaan wasiirka caafimaadka oo ka war bixinaya halka wax marayaan iyo kolba inta qof ee laga helay cudurka iyo halka lagu dawaynayo. Digniin baa la socota dadka loo jeedinayo. Kuwa laga helay cudurka ee uu sheegayo waxa u badan kuwa dalka soo galay sidayda ee ku seetaysan goobaha karantiinka. Salla Callee! Dee markaa sakati saw ina daanweyne maaha?!
Kolba sida dareenka maankaaga iyo filashada maskaxdaadu tahay ayaa saamayn weyn ku leh oo heegan gelisa ama hubka ka dhigta hab-dhiska difaaca jidhka. Xaqiiqo weeyi sayniska iyo dhakhaatiirtu isku raacsanyihiin oo caddaymaa loo hayaa. Hase yeeshee waa qof iyo ikhtiyaarkii oo isagaa dooran kara inuu is cadibo oo jidhkiisu is cuno ama uu caafimaad doorto oo culayska iskaga qaado cod togan oo uu naftiisa kula halaan halo. Sirtaa ehlu tasuwwufkaa hortood ogaaday oo diinta Alle iyo dariiqii Rasuulka SCW si qurux badan uga soo dheegay.
Cilmi dhegoodkaa aan ka bowsaday culimadaas ayaan ku baxsaday oo waxaan nafta ku habay heesihii Maxamedada (Tubeec, Kuluc iyo Mooge) iyo gabayadii Ruumi.
Wararka been abuurka ah
Wax kale oo la yaab leh ayaa maalmahan socda. Waa wararka beenta ah ee la leeyahay dawaa loo hayaa Covid-19 dadku baraha bulshada ku fidinayaan. Kan iyo keer iskaga dawee oo kaga hortag coronavirus. Haleel badanaa baan is idhi dadku, mise awalba waxanoo kutidhi kuteen ahi ‘social media-ha’ way dhex socdeene adaan eegi jirin.
Waxa iigu qosol badnaa beentaa internet-ka dhex qaadaysay laba ka mid ah: Qoraal aan is idhi wadaaddo Carbeed ayaa baahiyey oo la leeyahay Covid-19 Quraan kaa beri hore lagu sheegay oo Suurat Muddasir baa lagu xusay! Kuwo kale ayaa hadalkaa aan rumaysnahay in Quraanka lagu af lagaadaynayo Af-Ingiriisi u turjumay oo isna Muslimiinta Kenyaa WhatsApp-ka ku wareejinaya oo isagoo socduu daf i soo yidhi.
Wadaad, waa ta labaad e, Soomaali ah ayaa isna waxaabu leeyahay qof uu hayo aniga ii geeya Quraan aan ku akhriyo ayuu ku bogsanayaaye, haduu kici waayona aniga foodda xabad ha la igaga dhufto. Iska hadloow ina igarre! In aan cidi ka qorayn buu ogyahee hadalkaa muu yidhaahdeen. Waxan is weydiiyey wadaada yaa ku yidi Quraan keli ah baa lagu daweeyaa cudurrada? Sawkii waagii Rasuulka, Suubanaha qudhiisuba isku dawayn jiray dawooyinkii berigaa jiray ee dadkana is daweeya fari jiray.
Waxa kale oo jirtay iyadna in waadadii Soomaalida qaar kale oo ka mid ahi badbaadinta dadka iyaguba halis ku yihiin. Masaajidada lama xidhi karo, diintaa duulaan lagu yahay iyo wax ka daran bay akhriyayaan.
Waxaan is weydiiyey tolow hadii dadkii Allah caabudi lahaaba cudurku gam ka siiyo, masaajidka yaa geli doona ee ay nimankani wax u sheegi? Ma diintaa ku qalloocatay mise waxay is diidsiinayaan in Rasuulka Alle laga soo weriyey in ay Allah dunida oo rogmataa agtiisa kaga fududahay qof Muslima oo qudhiisa xaq darro lagu jaraa ilayn xaaladdan oo kale masaajidka soo gala oo garbaha isa saara waa dadkoow u badheedha dhimashee? Quraanku miyaanu ina odhan dadoow geeri gacmahiina ha ku doonanina? Malaha garasho la’aan kama ahee waa magac doon oo waxay is leeyihiin ha la yidhaahdo hebel baa diinta ku dhegan oo aan dhankiisa looga soo dhicin? Ujeedadooda maan garan, inay se gurracan yihiin waa wax aan gibil saarrayn.
Kuwo kalaa jira oo ku leh dawo Nabigu SCW sheegay ayaan u haynaa coronavirus, dhir la qooshay oon cidi dersin ayay dadka diinta jecel ku hodayaan. Diinal muraad iyo ta Allah kala duwan baa kuu soo baxaysa markaad dabcigooda sii dhugato! Waxa ka muuqda tilmaamaha maanta Soomaalida iyo Muslinka qaarkood ku soocaan qofka ay diin ku tuhmayaan.
Qaarkood marka ay hadlayaan erayo Af-carbeed ah oo inay bowsadeen caddahay bay ku celcelinayaan. Diinta ay sheeganayaan iyo damqasho la’aantooda markaad u sii fiirsato waxa kuu soo baxaysa in waxoogaa oo dhan ay isku dhaanto xikmadda caamada Soomaalidu weligeed ba hal hayska u lahayd ee iimaanka Allah iyo camalka diintu ku faraysaa ku kooban yihiin: Aan ku badbaadiyee Ilaahay meel baydhsan jiifso ayuu ku yidhi!
Heesaha jiilka dambe
Waxaas oo huf iyo been ah markaan ku dhego barjoobo ba waxay i xusuusinayeen xeradaan ku jiro iyo xorriyad la’aanta xanuunkeeda oo aan mar hore iskaga xalay heeso xul ah. Hase yeeshee marka aan madadaalada tiknoolajiyadda casriga ahi sahlayso isaga noqdo ee aan weheshado dhaxalkaa ay inooga tageen naxariista janno Allah ha ka waraabiyee hal doorkaa aan hore magacooda u xusay, ayaan hadana is idhaa bal hadda jiilka dambe iyagana eeg iyo hal abuurkoodu siduu yhay, waxa si waadaxa iigu soo baxaysay in aan haatan fan jirin ee hadal sheeko ah ay dadku ku heesaan.
Kaba darane curin muusig iyo mid laxan toona aanay jirin. Xagay ka keeni, iyaguna dookh ma leh dadka dhaliilaane waxay ku eedeeyaan in aanan Af-Soomaali xil iska saarin.
Hees baan ku celceliyaa oon hadba ku noqdaa dhegaysigeeda, maya waa laba; waa mid Tubeec iyo Kuluc mid ba sowd qaraama oo gooni ah ku qaadayo, ta kalena Maxamed Axmed ayaa qudhiisu qaadaya, waana erayadii Yuusuf Xaaji Aadan, Raxmatullaahi calayhi e.
Sidii Goray dhashiisii meel banaan dhigay. Inta aanu Maxamed bilaabin wuxuu codkiisii aan muusigaba u baahnay ku sheegayaa halka ay maalintaa joogaan oo Hargaysa ah iyo in uu hareer fadhiyo Yuusuf Xaaji Aadan. Waxa ii soo baxay sawir qiimo leh oo ah in waagii fanka iyo muusigga Soomaalidu xalaasha ahaa ay hagaayeen macallimiintii ummadda iyo mutacallimiintii.
Cuudka in uu tumayo Cabdinaasir Macallin Caydiid ayuu sheegayaa, mise waxa igu soo dhacday xusuus hoobal kale oo reer Sudan ah oo aan waa hore akhriyey taariikhdiisa wax laga qoray. Waa Cabdikariim Al-Kabli oo ah hoobal fan iyo aqoon isku darsaday midh se ay wadaagaan Cabdinaasir: waa in labadooduba cuudka aan cidi macallin ugu noqon ee iyagu is bareen.
Mar kale ayaa waxaan hadana ku qoslay, hooballadan maanta iyo heesahooda badan ee bilaa dhadhanka ah. Waa isku wada cod, waa isku wada muusig oo waxay sitaan ba waa Keyboard aan damcad lahayn, kaba sii daran oo haddana waxaad arkaysaa codkan kombuyuutarka lagu soo sifeeyo ee aad mooddo in gabigooduba ay laxan qudha kala amaahdaan!
Hadaan kaa jiidhay raali ahow waa dookhayga waxaan ka hadlee heesahaaga iska sido dhaliishu se waa wax qof kastoo durbaan qaatay dalbaday.
Aan mar ku noqdo karantiimadii iyo karaahiyadeedii, in kasta oo aan ku diiqadooday oo aan dareemayey in xorriyadii la iga qaaday ayaan hadana arkaa buugaagta aan sito. Mid la yidhaa ” The Mourning Tree” ama “Weerane” oo ah labada magac ee uu qoraagu u bixiyey buugiisa iyo waxaa ka mid ahaa waxa aan akhrisanayey kii taariikh nololeedkii Mandela.
Labaduba waxay ka waramayaan xorriyadooda oo dulmi lagaga qaaday iyo waayadii ay xabsiga ku jireen. Labaatan Jirow iyo Robben Island ayey ka sheekaynayaan iyo waayihii qallafsanaa ee ay ku muteen. Anigii is lahaa waad xidhantahay ayaa garawsaday in aan meesha nasasho u imid ee aan waxba iga maqnayn oo aan weliba tas-hiilaad fiican oo telefoon, kutub, internet iyo TV- ba haysto.
Khamiis 2 Abriil abbaaro afartii galabnimo ayaa waxa noo yimid shaqaalihii caafimaadka ee na baadhayey. Way wada qufulanyihiin, dhar cad oo tin iyo cidhib qariyey ayey gashan yihiin, muuqooda marka aad aragto iyo waxyaabaha badan ee ay sitaan waabad naxaysaa oo waxa i hor yimid muuqaalladii aan TV-ga ka arkayey oo lugaynaya!
Waxa muunad laga qaadayaa qofka candhuuftiisa iyo duufka oo shaybaadhka la geynayaa. Xaasaw ama silig yar oo dhuuban oo afka hore cuddbi yari kaga duuban tahay ayay ka soo saarayaan bacdii ay ku moorgaraysnayd ee ay warshada kaga timid.
Qiyaastii dhererka siliggaa yari waa 20 cm. Sanka ayaa mid lagaa gelinayaa oo waxay gaadhsiinayaan halka hunguri cadka iyo sanku iskaga furan yihiin, xanuun badan ma laha ee dhawr dhibcood oo ilmo ah ayaa indhaha kaa soo boodaya adoo is tiilaya, hadana marka sidaa sanka looga soo bixiyo ayaad hindhiso ka daba keenaysaa. Afkaa ku xiga oo intaad carrabka soo saarto ayaad aad u kala qaadaysaa, siliggii baa hadana ilaa dalqada gaadhaya.
Xanuun malaha ta afku, hadiise qofku malaha dibirsanyahay waxa suurto gal ah inuu hunqaaco. Afar iyo labaatan saacadood ilaa sideed iyo afartan gudahood ayay ku soo baxaysaa natiijadu ayaa nalagu yidhi.
Welwelka ugu weyni galabtaas ayuu ii bilaabmay oo waxa i hor yimid sidii basaska habeenkii aan dalka soo galnay na loog soo guray, adhi baa la rarayaa moyee aadamaa meesha maraya ismaad tidhaahdeen. Haba yaraatee xataa wax aanu faraha iska marino namay siin Masks-na hadalkooda daa. Tolow siday noqon ayaan ku sugaynay, maxaa soo bixi! Subaxnimadii Sabtida goor ay 48 kii saacadood wax aan badnayni ka hadhsanyiihin, ayaa waxa wasaaradda caafimaadka ka soo baxday wareegto odhanaysa dadka ku jira karantiinka waxa loo kordhinayaa maalmaha oo 28 caano maal oo kale ayay ku sii jirayaan.
Fajac, dhako faar iyo niyad jab ayaa igu dhacay. Goor labadii duhurnimo iyo waxoogaa ah, ayaa shirkii jaraa’id ee wasiirka caafimaadku soo galay TV-ga dhego wadan baan u furan, maalintaa dadka cudurka laga helay 4 qudha ayey noqdeen. Is macaashsiiyey oo waxaan idhi kollay waa natiijada dadkii aad ku jirtay taa soo baxday.
May noqon. War ay wasaaraddu noo soo marisay maamulka hudheelka ayaa la noogu sheegay in natiijadaa soo baxday taayadii aanay ku jirin. Waxa se aan ku yara nafisnay markii intaa la noogu daray in goobaha xeerkii karantiinka jabiyey ee dadka lagu sii haynayo aanu ku jirin hudheelka aan ku xaraysannahay. Neef qabow baa iga soo baxday laakiin weli farta iyo wadnaha waan isku hayaa oo intayada hudheelka kuwada xaraysan waxa na loo sameeyey WhatsApp aan kuwada sheekaysano.
Waxa meeshaa walaac, belo sheeg iyo fariimo karaahi ah la is weydaarsanayo malayn maysid. Madax xanuun iyo galabtaas oo aanan u bixin 30-kii daqiiqo ee adoo askari ku ilaalinayo sidii maxbuuska dibadda laydhsiga laguu geynayey oo aan iska maanacay bay ii ahayd.
Fiidkii ayaa waxa na lagu wargeliyey in waraaqo aanu buuxinayno wasaaraddii soo dirtay oo la naga doonayo in aan buuxino oo subaxa hore albaabka hoostiisa ka soo tuurno, si qof loo diyaariyey u guro. Waraqadaa markaan arkay waxaan garawsaday in ay ahayd tii meesha lagaga baxayey, sababta oo ah waxa lagaa doonayaa in aad ku qorto magacaaga, xaafadda aad degantahay, telefoon lambarkaaga, qofka kuu xiga iyo telefoon lambarkiisa. Yabaalkii iga duul, il baan se ka hurday allaylkii oo dhan oo sidaa ayaa waa iigu beryey.
Abaaro tobankii subaxnimo 5 Abriil oo Axad ah ayaa waxa maamulka hudheelku nagu wargeliyeen in mar kale loo xaqiijiyey in aan goobaha dadka lagu sii haynayo hudheekani ku jirin. Xilli qadihii ka dib, qiyaastii labadii duhurnimo oo daqiiqado ka hadhsanyihiin, ayaa waxa na soo gaadhay fariin ka timi wasaaradda caafimaadka oo noo xaqiijisay in dhammaan 144 kii qof ee ku jiray hudheelka aan midna laga helin fayraska. Alla maxaa farxad iyo raynrayn dhex qaadday WhatsApp-kii shalay karaahidu dhex fadhiday!
Waxa kale oo fariintaa farxadda leh noo la socday in aanu 14 kii maalmood ee khasabka ahaa dhamaysanayno oo aanaan degdeg u dareerayn. La wada farax oo si kal iyo laab ah baa loo aqbalay amarkaa. Mahadnaqa Alle ee meeshii aan fariimaha isku weydaarsanaynay duulaya malayn maysid, jawigii murugada miidhan ahaa maalin ka hor wuxuu isku rogay farxad iyo niyad sami.
Waxa sidaa ku soo dhammaaday maalmihii karantiinka oo kor ka xaadiskaa yar aan ku soo koobay sidii wax ahaayeen. Kooxdayada halkan ku xeraysnayni hormo hormo ayay u bixi doontaa. Hormada ugu dambaysa ee goobta ka hulleelaysa maalin ka dib ayaan ka mid ahay.
Waxaan ku sugayaa Alla bari aan uurka ka wado oo aan leeyahay Allayoow kurbada ka dulqaad aduunyada, Al-faatixa.